Ahoana no fomba ampiasaiko ho an'ny backlinks Yahoo?
Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa ny fitaovam-pitadiavana hafa tahaka an'i Yahoo ho an'ny backlinks, raha tsy misy fomba hafa handefa ny tranonkalany na ny blôginy ho an'ireo lehibe toy ny Google mihitsy. Koa, etsy ambany dia hasehoko anao ny fomba fampiasana an'i Yahoo ho an'ny backlinks. Ataovy tsotra izao, hahazo valiny Yahoo izahay izay hitondra anao ireo valiny azo antoka ho setrin'izany. Mariho anefa fa ny zavatra tokony hoeritreretin'ireo valim-boka ireo araka izay tratra, mba hahazoana antoka fa tsy hantsoina ho spam izy ireo. Ary misy fomba hafa ahafahana mampiasa Yahoo ho an'ny backlinks - eto ambany dia hasehoko anao ny lisitra feno izay ahitana ireo safidy rehetra azonao atao mba hamitana ilay asa. Ireto ny hevi-bala lehibe indrindra ho anao ao an-tsaina: voalohany
Alohan'ny zavatra hafa, azonao ampiasaina fotsiny ny Bing Mpandrindra Webmaster hanolotra ny tranokalanao na ny blôginao ho an'ny Yahoo. Ataovy an-tsaina fa Yahoo izao dia manana an'i Bing. Noho izany, ianao dia alefa mivantana mankany amin'ny kitendry Bing ao amin'ny tranonkala Bing mba hamita ny fandefasana ny fangatahana.
Azonao atao ny manandrana manolotra ny tranonkalanao na ny blôgy URL mivantana amin'ny môtô Bing Bing. Raha manao izany ianao, dia tsy ilaina ny mandany ny fotoananao manandrana mampiasa ny fampiasana ny Webmaster Tools Bing.
Azonao ampiharina amin'ny fifanakalozan-kevitra sasantsasany mifandraika amin'ny sehatry ny indostria na hikirakira ny fizarana ampahany amin'ny ezaka fanorenana rohy. Raha te hampiasa Yahoo ho an'ny backlinks ianao, ny zavatra rehetra ilainao dia ny mandefa hafatra tsara momba ny fanompoana amin'ny Yahoo Answers. Amin'izany fomba izany, ianao dia tsy hahazo afa-tsy rohy sarobidy ho setrin'izany fa hahazo fitaterana fanampiny koa.
Ary mety ihany koa ny mandeha mitady ny fanontaniana tena be fanontaniana indrindra amin'ny Yahoo Answers (a. K. ny. FAQ) mba hahatakarana ny voanjo sy ny bolongana - ary hanolotra lahatsoratra fanampiny fanampiny mifandraika amin'ireo raharaha mahaliana momba ny tombotsoan'ny mpihaino anao na ny tsena nasionaly.
Ankoatra izany, azonao atao ny mamela bebe kokoa ny raharaha. Andramo ny mieritreritra ny tranga tsirairay amin'ny ambaratonga - Midika izany fa azonao atao ihany koa ny miadam-pandeha, mamaly ny fomba tsara indrindra azonao atao, ary tsy maintsy mamoaka rohy ho an'ny valiny mahasoa anao tsirairay. Mazava ho azy fa haka fotoana be dia be, ary raha tsy misy ny voka-tsoa azo eritreretina hita maso indray mandeha. Na izany aza, dia soso-kevitra ny hiasa tsara amin'ny famolavolana anarana marika matanjaka sy azo itokisana ianao ho an'ny tranonkalan'ny orinasa orinasa na blôginao. Amin'izany fomba izany, tokony hifindra tsikelikely ianao amin'ny tanjona lehibe amin'ny fananganana profil -pitsikana mafy - ary tsara ianao!
Miasa amin'ny valiny ampy tanteraka amin'ny Yahoo ho an'ny backlinks - eto no tokony ho tsaroanao. Eny, haka fotoana be dia be, mba hahalalanao tsara ny valiny rehetra. Amin'izany fomba izany, aza avela handefa valiny fohy na tsotra fotsiny - raha tsy tianao ny hitovy aminy amin'ny spam. Farany, eto no tokony ho tsaroanao - ny olona bebe kokoa dia mianatra momba ny tranokalanao na blôginao amin'ny valinteny Yahoo (na dia tsy misy rohy azonao aorian'ny lahatsoranao) - ny zavatra tsara kokoa dia ho avy Source . Ny fanalahidy eto dia ny mandoa ny fotoanao, ary vita ianao!